आर्थिक वर्ष २०७
खाडी मुलुक र मलेसियामा रोजगारीका लागि जानेमा पुरुषको संख्या ठूलो छ । तर महिलाको संख्या
परदेशमा आफन्त भनेका तिनै साथीभाई हुन्छन । तिनै साथीभाईको मद्धतले धेरै नेपालीले प्रवा
युरोपका पछिल्ला नेपाली पाहुना: फेरिएको परिचय
अहिले नेपाली नपुगेको देश कुन होला ? अनुमान गर्न पक्कै सजिलो छैन । किनकी अहिले नेपाली नपुगेको देश सायदै कम होला । पछिल्लो केहि बर्षयता अवसरको खोजिमा भौंतारिने नेपालीको संख्या बढ्दै जाँदा खाडी मुलुक देखि अमेरिका, यूरोप र अफ्रिकी मुलुकहरुमा समेत ठूलो संख्यामा नेपाली पुगिसकेका छन् ।
सन् ९० को दशक देखि यूरोपका मुलुकहरुमा नेपाली सिमित मात्रामा छिर्न थालेका थिए । यो क्रम क्रमिक रुपमा
मलेसियामा सुरक्षित हुन यी कुरामा ध्यान दिनुस्
मलेसिया नेपाली युवाका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य हो । २०१३ अघिको तथ्याङ्ग हेर्ने हो भने त मलेसिया नेपालीका लागि पहिलो रोजाईको गन्तव्य थियो । नेपालको जस्तै वातावरण र हावापानीका कारण पनि मलेसिया नेपालीका लागि श्रमको पहिलो र आर्कषक गन्तव्य बनेको हो ।
मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीले सेक्युरेटी गार्ड, उद्योगलाई नै रोज्ने गरेका थिए र छन । मलेसियामा केहि समय देखी श्रम समस्या भए
विदेशबाट फर्केकाहरुलाई दिने ऋणको व्यवस्थामा सुधार्नुपर्ने कुरा
स्वदेशमा नै नेपाली युवालाई रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न वर्तमान सरकारले केहि कार्यक्रमहरु अगाडी सारेको छ । यसका लागि गएको भदौ २१ गते नेपाल सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्वन्धित एकिकृत कार्यविधि, २०७५ पारीत गर्यो । सो कार्यविधिले शिक्षित बेरोजगारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने देखि बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई स्वदेशमा नै रोजगारीमा जुट्ने वातावरण निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ
विश्वभर नै आप्रबासीहरुको संख्यात्मक बृद्धीलाई ध्यानमा राख्द
यसो भएमा मात्र मलेसियासँगको श्रम समझदारी नेपाली श्रमिकलाई फाइदाजनक
मलेसियाको रोजगारी भन्ने वित्तिकै धेरैले झट्ट उद्योग, कलकारखानामा श्रमिक हुन वा सेक्यूरीटी गार्डको काम गर्न जाने नेपालीलाई सम्झिन सक्छन् । तर नेपाली श्रमिक भन्दा पनि पहिला सेनाका रुपमा नेपाली त्यहाँ पुगेको इतिहास छ । मलायामा पुगेका ति कतिपय नेपाली उतै घरवार बसाएर गुर्खाजका नामले चिनिएका छन् । पछि मलेसियाको निर्माण कार्यमा र अन्य क्षेत्रमा अवैधानिक रुपमा भएपनि नेपालीहरु पुगेका हुन् ।
प्रवासमा नेपाली राजनीति र त्यसले निम्त्याएका समस्या
श्रम समझदारी: कति ऐतिहासिक, कति चुनौतिपूर्ण ?
मलेसियामा नेपालीका लागि रोजगारीः अव के ?
आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई मुलुकको समृद्धिका लागि प्रयोग गरौ